Nhau - Shandong hofori yakakosha pombi indasitiri yeNissan rekodhi yakazorodzwa katatu akateedzana
Natsiridza maitiro ekugadzirisa matambudziko matsva
Kurongeka kunonzwisisika kwemaitiro ekugadzira sangano, kuronga mavira maviri kune matatu kugadzirwa kwemichina, kufanoronga kugadzira uye kugadzirira kugadzirwa. Iyo inoshandura kunyunguduka kutenderera kunofanirwa kudzorwa mukati memaminitsi makumi maviri nemapfumbamwe, uye hukama hwehukama hwekushandura kunyunguduka kutenderera, kukwenenzvera kurapwa, kuenderera kutenderera kutenderera. uye inopisa yakakungurutswa ndiro yekugadzira tambo kugadzirwa kunofanira kurongeka. Kurumidza budiriro yehunyanzvi yematambudziko, simbisa vimbiso yemidziyo, kuderedza marudzi ese etsaona, kuvandudza kugadzirwa kwakanaka, kuve nechokwadi chekuti avhareji yemazuva ese kugadzirwa kwesimbi kunosvika kukosha kwainotarirwa, uye kubuda kwechigayo. inosvika kukosha kwakarongwa.
"Ticharamba tichiona kuchengetedzwa pamwe chete kwemaitiro ega ega, kugadzira matanho ekugadzirisa matambudziko akakosha, uye kuita munhu ane mutoro. Kuburikidza nemusangano wevhiki nevhiki wekuongorora manejimendi, kuongorora kwakadzama kwematambudziko, matambudziko ekuenzanisa kuti tizive pfungwa, sangano. , zvikanganiso zvokutarisira, isa nharidzano yakakwirira, inogadzira chinyorwa chakakwirira.”
Ita matanho matsva ekuenzanisa maindasitiri
Namatira kune maziso nechomukati, uchivavarira kuenzanisa mabhizinesi, kutenderedza mutengo, kugadzirwa, kunaka, kugona uye zvimwe zvakakosha zvehupfumi uye zvehunyanzvi zviratidzo, kunyatsobatanidza marwadzo mapoinzi, kuomerwa nekuvharira kugadzirwa kwemaitiro, shandura maitiro ekushanda, compaction mutoro, huwandu, digitaalinen, standardized manejimendi mukati, kwenguva refu basa, kuedza kutevera advanced.Kuburikidza "kudzidza simbi ruzivo kusimudzira index" basa, ZhaBai pfungwa gaka, unyanzvi zviratidzo uye manejimendi gaka, kuomerera kune longitudinal, mhiri kumucheto, layer. pane layer push indekisi kuita, matanho ekuita uye mutoro, positi, timu, mashandiro, kupatsanura mana mazinga ezviratidzi nhanho nhanho tsigiro.
“Mudanho rinotevera, tichakwikwidzana naSiping Jingang, Jilin Jianlong naShanxi Jianlong kuti vadzidze ruzivo rwepamusoro mukuderedza mitengo yekugadzira, kuvandudza mashandiro ekugadzira, kuvandudza zviratidzo zvemagadzirirwo uye kuvandudza kunaka kwechigadzirwa, kudzidza kubva kune zvakanaka maitiro, kumisa zvinangwa, kubata uye kubata. kusvika paavhareji yemaindasitiri.”
Hutungamiri hwepfungwa hunounza simba idzva
Kubva munaFebruary, Shandong Jute Pipe Bhizinesi Dhipatimendi rakatarisa pamutsara mukuru wekugadzira pfungwa yose yekuderedza kushandura kunyunguduka kutenderera, kuvandudza slab kudhonza kukurumidza uye kuvandudza kubuda kwechokwadi kwechigayo.Tungamira vashandi vose kuti vatevedzere dambudziko -yakatarisana, shandura maitiro ebasa, simbisa manejimendi ekutanga, uye nyatso nyatso tarisisa kuitiswa kwehurongwa. Rongai zvakanyanya makadhi nevashandi kuti vaite hurukuro huru ye "kuita kuti moto unoputika ugare wakasimba uye unoshanda, chii chandinofanira kuita ", nzvimbo imwe neimwe yekushanda pamwe chete nekugadzikana kwekugadzirwa kwesimbi ndeyekuvimbisa kugadzikana kwehurukuro yehuni yemoto, kuongorora kwakadzama, kugadzikana kwezvigadzirwa uye kugadzikana kwekushanda, gadzira 65 matanho chaiwo. Pakati peizvi, 49 yakave yakaitwa uye yakasvika pazvinotarisirwa;16 havana kuwana zvinotarisirwa uye vari kumberi.Kushingaira gadzira mamiriro ekushanda epfungwa dzakadzika, chinangwa mugwara rimwe chete uye synchronous chiito, kupa vimbiso yakasimba yekufambira mberi kweplate coil kubuda uye kubudirira.
"Kuti tiimbe mutambo wekuvhura mukutanga kwegore, Komiti yeParty yeSimbi Business Division, ichitungamirwa nekuitwa kwebasa rebhajeti regore, yakaita makwikwi ebato 'kudzidza ba Steel, kusimudzira kukwidziridzwa, kugadzira yakakwirira. goho uye kuwedzera kushanda zvakanaka 'semutakuri.Kuburikidza nekuvaka kwe'Xueba simbi' piramidhi mana-level index system uye kiyi yakakosha zviratidzo 'imwe kusvika kumagumo' nzira, pwanya maitiro, ita kuisirwa, gadzira budiriro, akaisa hwaro hweiyo mutsara wekugadzira frequency kutyora rekodhi. "